Faa'iidooyin noocee ah ayaan arki doonaa haddii aan iibsado Faallooyinka YouTube?
Faallooyin tayo sare leh, oo gacanta lagu galiyay.
Waxaan daawaneynaa fiidiyahaaga oo waxaan qoreynaa faallooyin muhiim ah.
Gaarsiinta ayaa la faafiyaa maalmo badan.
100% aamin ah & gaarsiinta damaanad qaaday
Natiijooyinku waxay ku bilaabmayaan 48-72 saacadood & sii soconayaan illaa laga dhammaystirayo.
Waxaan had iyo jeer keennaa 100% of your order!
Muxuu qof walba u iibsanayaa faallooyinka YouTube?
Sida odhaahdu u socoto; Inaad nin noqoto maalin maahan shaqo, sidaa darteed waxaan sidoo kale dhihi lahaa inaan ku guuleysto ama fiidiyowga fiidiyowga ah ee YouTube sidoo kale maaha shaqo maalin. Xaqiiqda jirta ee dadka intooda badani aysan rabin inay aqbalaan ayaa ah; YouTube waa aalad suuq geyn suuq geyn oo ay iska leedahay. Dadka intiisa badani waxay u arkaan YouTube inay tahay "Video Giant Video Market"; Meel aad aado markii aad rabto inaad martigeliso fiidiyowyo lagu wadaago baraha warbaahinta bulshada. Fikirkaan aad buu u qaldan yahay. Anaga ahaan si dhab ah inaan u fahamno tan; aan u qaadanno fiidiyow kasta oo aan u soo dejino sida casriyeyn xaalad ahaan ah. Sideed dareemaysaa marka qofna kahadlin ama uusan jeclayn xaaladaada? Faallada daawadaha ayaa ah habka ugu weyn ee lagu xaqiijin karo fal-galkiisa ama muuqaalkeeda fiidiyowgaaga. Marka waxaad hadda aragtay baahida loo qabo inay muhiim tahay in dadka laga faalloodo fiidiyowyadaada. Faallooyinka YouTube waa qodobka ugu weyn ee lagu kala saaro fiidiyowga caadiga ah iyo midka caanka ah. Fiidiyow caan ah ayaa iska cad inay yeelan doonaan faallooyin iyo hawlgallo badan marka loo eego fiidiyaha caadiga ah. Marka, haddii aad rabto inaad ka dhigto fiidiyowgaaga mid caan ah, waxaa lagama maarmaan ah inaad dadka ka faallooto fiidiyowgaaga. Haddii aadan xubni ahaan ka helin faallooyin, markaa xalka ugu fiican ayaa ah inaad iibsato faallooyinka YouTube.
Hadda aan kuu sheego sababta qof walba u iibsanayo faallooyinka YouTube:
Hawlgelinta Kordhinta: Markaad iibsanaysid faallooyinka YouTube fiidiyowgaaga, daawadayaasha cusub ee arkaya fiidiyowgaaga waxaa ku dhici doona inay daawadaan sidoo kale waxay rabaan inay ku mashquulaan qeybta faallooyinka. Tani waxay kicin doontaa daawadayaal badan oo ka faalloon doona fiidiyahaaga, sidaas darteedna u kordhinaysa darajadiisa raadinta. Sidaas darteed, dad fara badan ayaa heli doona fiidiyahaaga.
Soo bax Ukunta xun: Waan wada ognahay YouTube ma ahan meeshaas in wax walba ay ku qumman yihiin. Waxaa jira cadaawad badan iyo nacayb. Qaar ka mid ah dadka aad uugu macnaha badan ayaa ku daadinaya qaybtaada faallooyinka dib u eegisyo badan oo xun. Dariiqa keliya ee lagu badbaadiyo xaaladdan waa in la iibsado faallooyinka YouTube si aad uga baxdid inta aad soo sheegtid.
Dhameystirka Aragtidaada Soo Baxday: Hal shay oo si fudud uga saari kara aragtidaada iyo waxa aad jeceshahay waa saami-aragti hoose oo ra'yi-dhiibid ah. Badanaa marka aad haysatid aragtiyo dabiici ah iyo waxa aad jeceshahay, adeegsadayaasha noocaas ah waxay la tahay inay caadi tahay in laga tago faallo ama labo. Markaa sida aad u iibsanaysid aragtida YouTube iyo waxyaalaha aad jeceshahay, sidoo kale maskaxda ku hay inaad iibsato faallooyin si fiidiyowgu uusan u muuqanin inuu u muuqdo mid laga shakisan yahay. Iibsashada faallooyinka waxay ka dhigi doontaa aragtidaada aad soo iibsatay iyo waxyaabaha aad jeceshahay inay u muuqdaan kuwo dabiici ah.
Talo dhakhso leh, marka aad rabto inaad iibsato faallooyin, isku day inaad iibsato faallooyin dhab ah, taas oo ah waxa aannu soo gudbino. Faallooyinkaas dhabta ah si fudud ugama raadayn karaan algorithms-ka YouTube-ka. Faallooyinkaas dhabta ah waxay ka yimaadeen dadka loo siinayo inay ka bixiyaan faallooyin, faallooyin ku habboon oo ku saabsan fiidiyahaaga. Faallooyinkaasi waa kuwo macno badan oo macquul ah. Aad ayey uga fiican tahay faallooyinka been abuurka ah ee ka yimaadda bots-yada kuwaasoo inta badan ah; lammaaneyaasha ereyada qalqalloocan ee aan macnaha lahayn micno kasta ha lahaadeene.
Maxaa ka dhigaya faallooyinkaaga mid tayo sare leh?
Markaad iibsato faallooyinka YouTube naga ah, kooxdeena ayaa daawan doonta fiidiyahaaga waxayna bilaabi doontaa qoritaanka faallooyin, fikir iyo dhiirrigelin ku saabsan fiidiyowgaaga. Waxaan markaa u dhaqaaqnaa masaafada dheeriga ah waxaanan ku fidinay gaarsiinta ra'yigaaga dhowr maalmood.
Alaab-qeybiyeyaasha kale badankood waxay soo bandhigaan noocyo "guud oo Fiican!" Noocyo faallooyin ah maxaa yeelay way fududahay oo waqti yar ayey qaadataa. Intaa waxaa sii dheer, horay ayey usii socon doonaan oo waxay ku gaarsiin doonaan dhammaan faallooyinka 20 tusaale ahaan dhowr daqiiqo gudahood.
Arinta aragtida ku soo qulqulaya faallooyinka muddo gaaban gudaheed ayaa ah in dadku arki karaan goorta la dhajiyay iyo haddii ay wax walba dhacayaan isla waqtigaas, waa calaamad la hubo inuu qofku iibsaday.
Markaad isticmaasho adeeggeena, waxay u muuqdaan kuwo dabiici ah iyo kuwo dabiici ah!
Mudo intee le'eg ayay qaadataa in fiidiyowgeygu bilaabo inuu faallo ka helo?
Maadaama aan daawanayno fiidiyahaaga, qoro faallooyinka la xiriira ka dibna aan gacanta ku siino, waxay qaadaneysaa waqti cadaalad ah. Guud ahaan, faallooyinkaagu waxay bilaabi doonaan inay ka soo muuqdaan fiidiyowgaaga gudahooda 48-72 saacadood ka dib markii amarkaaga la dhigo ka dibna waa la faafi doonaa dhowr maalmood si ay uga dhigaan inay u muuqdaan kuwo dabiici iyo dabiici ah.
Waa maxay tirada ugu yar ee faallooyinka aan dalban karo fiidiyoowga?
Tirada ugu yar ee faallooyinka aan u soo bandhigi doonno fiidiyoowga waa faallooyinka 5. Natiijo ahaan, haddii aad dalbato faallooyinka 10, waxaad u gudbin kartaa 1 illaa URL-yada 2 annaga si aan faafinno faallooyinka.
Haddii aad dalbato faallooyinka 20, waxaad u gudbin kartaa 1 URL-yada 4 URL.
Faallooyinka YouTube-ka ayaa lagu daray gaadhigaaga.
1000 Muuqaal ($ 20) 5000 Muuqaal ($ 60) 10000 Muuqaal ($ 100) 25000 Muuqaal ($ 200) 50000 Muuqaal ($ 350) 100000 Muuqaal ($ 600)
100 jecel yahay ($ 13.50) 200 jecel yahay ($ 20) 300 jecel yahay ($ 25) 600 jecel yahay ($ 40) 1200 jecel yahay ($ 70) 2500 jecel yahay ($ 140) 5000 jecel yahay ($ 270) 10000 jecel yahay ($ 530) 15000 jecel yahay ($ 790) 20000 jecel yahay ($ 1050) 30000 jecel yahay ($ 1550)
100 saamiyada ($ 10) 250 saamiyada ($ 20) 500 saamiyada ($ 30) 1000 saamiyada ($ 50) 2000 saamiyada ($ 80) 5000 saamiyada ($ 130) 10000 saamiyada ($ 250)